असार मसान्तभित्र हुने भनेको नेकपाको पार्टी एकताको कोर्ष किन अझै पूरा हुन सकेन ? पढ्नुहोस्::Nepal's Digital Paper
असार मसान्तभित्र हुने भनेको नेकपाको पार्टी एकताको कोर्ष किन अझै पूरा हुन सकेन ? पढ्नुहोस्
काठमाडौं । यही असार १४ गते मदन भण्डारीको ६८ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही (असार) महिनाभित्र नेकपा एकता प्रक्रिया टुंगिने उद्घोष गरेका थिए ।त्यसो त असार २१ गते बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले असार मसान्तभित्रमा सांगठिनक एकता टुंगिने वचन दिएका थिए । ओलीमात्रै होइन, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि असार मसान्तभित्र एकताको अध्याय पूरा हुने जिकिर गर्दै आएका थिए ।
तर, असार मसान्तसम्ममा पनि पार्टी एकताको कोर्ष पूरा हुन सकेन । संगठनात्मक एकताको ‘डेडलाइन’ पार भएको यो नै पहिलो पटक होइन । आफैँले निर्धारण गरेको मिति अध्यक्षद्वयले बारम्बार गुजार्दै आएका छन् ।पार्टी एकताका सवालमा बाँकी रहेका काम पूरा गर्न सोमबार पनि दुई अध्यक्ष छलफलमा जुटेका थिए ।
तर, यसअघि नै टुंगिइसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई छाप्न प्रेसमा पठाउनेबाहेक अरू विषयमा ठोस छलफल हुन नसकेको पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।उनका अनुसार नेताहरूको कार्यव्यस्ताका कारण सचिवालयको बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेको छ । कार्यविभाजनका सन्दर्भमा भने अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव तयार पारेकाले सचिवालयको बैठक बसेर निर्णयमा पुग्नमात्रै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
अविश्वास र ध्रुवीकरण बढ्यो
संगठनात्मक एकता नटुंगिँदै पार्टीभित्र नेताहरूका बीचमा अविश्वास बढेको छ । पार्टी एकतको वर्षदिन नबित्दै अध्यक्ष प्रचण्डले १५ महिनापछि सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चलाए भने केपी ओलीले पार्टीको राजनीतिक लाइन तत्कालीन एमालेको सैद्धान्तिक कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्छ भनेर विवादलाई नयाँ मोड दिए ।अध्यक्षद्वयका पछिल्ला केही गतिविधि र अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र आशंका पैदा भएकाले र त्यसले एकता प्रक्रियालाई लम्ब्याइरहेको नेताहरूको बुझाइ छ ।
“तमाम आशंका र अन्तरविरोधको अवस्थाबाट पार्टी गुज्रिइरहेको छ । यसले पनि एकताका केही विलम्ब भएको होला । अब छिट्टै सचिवालय, स्थायी कमिटीको बैठक बसेर एकतालाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ,” एक सचिवालय सदस्य भन्छन् ।
इन्चार्ज र सहइन्चार्जमा सहमति जुट्यो
पूर्वएमालेले गत वैशाख ९ गते ७७ वटै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव भागवण्डा गरेको थियो । ाँडफाँटअनुसार एमालेको भागमा ४४ वटा जिल्ला परेको थियो । माओवादी केन्द्रको भागमा ३३ जिल्ला परेको थियो ।
अहिले सोही भागवण्डाका आधारमा जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंग्याउने सहमति भएको पौडेलको भनाइ छ । एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा माओवादी केन्द्र इन्चार्ज, माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा एमालेले इन्चार्ज लिने समझदारी भएको छ ।
पुरानै (साविक पार्टीका जिल्ला कमिटीका) जिल्ला इन्चार्ज सहइन्चार्जलाई जिम्मेवारी दिनेगरी कार्यविभाजनको तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् । “धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू बेरोजगार रहेकाले उनीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिनेगरी एकभन्दा बढी सहइन्चार्ज तोक्ने कुरा पनि छ । केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो छ,” उनी भन्छन् ।
तर, एकभन्दा बढी सहइन्चार्ज बनाउँदा शक्ति सङ्घर्ष चर्कने भएकाले एकभन्दा बढी सहइन्चार्ज चयन गर्न नहुने वरिष्ठ नेता माधव नेपालले तर्क गर्दै आएका छन् । नेता नेपालकै असहमतिका कारण यसअघि अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव गरेको कार्यविभानको सूचीमाथि सहमति जुटेको थिएन ।पछिल्लो (पुरानैलाई इन्चार्ज तोक्ने) प्रस्तावमा नेता नेपाल पनि सकारात्मक रहेको पौडेलको भनाइ छ ।